Izinguquko Ezibalulekile Okudingeka Uzenze Emhlanganweni Wakho Wokuthengisa Oqala Ukuthengiswa | Martech Zone
Izinguquko Ezibalulekile Okudingeka Uzenze Emhlanganweni Wakho Wokuthengisa Wokuqalisa Wonyaka Wokuthengisa
NgoLwesithathu, Novemba 15, 2017 U-Ashley Welch
Sekuzoba njalo ukuthi isikhathi sonyaka futhi, lapho abaholi be-Sales and Sales Enablement behlela imihlangano yabo yaminyaka yonke yokuqalisa ukuthengisa. Akuwona umsebenzi omncane. Ngaphezu kokuhlelwa okuyisisekelo kokukhetha indawo oya kuyo, ukuvimba amakamelo nokuthola indawo yokuhlangana, kunengcindezi engashiwongo yokuba phezulu emhlanganweni wangonyaka odlule. Singayenza kanjani ibe nkulu futhi ibe ngcono? Yiziphi izipikha zezivakashi ezizokhuthaza? Yimiphi imiklomelo ezosho lukhulu kubadlali bethu abaphezulu?
Siyakuthola. Sizihambele eziningi zazo ngokwethu emisebenzini yethu, futhi sisiza amaklayenti ethu ukuthi enze ama-kick-offs amaqembu abo ngokubuza: Kuthiwani uma uhlela umhlangano wakho ngokokubuka kwekhasimende? Nayi imibono emihlanu egxile kumakhasimende ongazama ukuyenza umhlangano wangonyaka ozayo ube ongcono kakhulu okwamanje:
Ukuhlelwa Kwe-Akhawunti Kwamasu. Lapho sicabanga ngama-Akhawunti Wamasu, sivame ukucabanga ngama-akhawunti ethu aphezulu, amakhasimende athenga kakhulu kithi. Emhlanganweni ozoqala umdlalo, isikhathi esiningi sabelwa ukubuyekeza ukuthi yimiphi imikhiqizo nezinsizakalo ezengeziwe ezingathengiswa ukukhulisa imali kanye nokuqinisa ubambiswano. Lona umsebenzi obalulekile, kepha ungashesha ukuzimela — mina, mina, thina. Imikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu, umugqa wethu ophansi. Ingabe kabusha? Cabanga kabusha mayelana nokuthi ngubani omthatha njengama-akhawunti akho amasu ngokuya nge- Ama-Extremes nama-Mainstreams. Amakhasimende akho ajwayelekile kungaba lawo ma-akhawunti amakhulu athenga futhi ajabulele inani elikhulu lemikhiqizo nezinsizakalo zakho. Kepha kufanele ucabangele ukufaka amanye amakhasimende akho we-Extreme: imaphi amakhasimende enza izinto ezithakazelisa kakhulu ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho? Bameme ukuthi bajoyine iphaneli lamakhasimende bese ubacela ukuthi bakhulume ngama-akhawunti abo amasu.
Mema Amakhasimende ukuthi Aqaphele Abadlali Bakho Abaphezulu. Abantu abathengisayo basebenza kanzima — futhi abantu abathengisa kakhulu kunabo bonke bangahlukaniswa kalula ensimini. Ngalezi zizathu nezinye eziningi, kubaluleke kakhulu ukubona abadlali bakho abaphambili phambi kontanga yabo. Cabanga ukumema amakhasimende wabadlali bakho abaphambili ukuthi bazokhuluma ngawo — noma ubanikeze umklomelo. Cishe yindumiso enhle kakhulu iqembu lakho elingayithola.
I-Spur Innovation enezimo ezifanayo. Sivame ukuzwa kumakhasimende ethu ukuthi afisa ukukhuthaza. Amakhasimende afuna ukusebenza nabasebenza ngokuthengisa abakhuthazekile abangabasiza bacabange ngaphandle kwebhokisi. Yilapho ama-analogu angena khona. Ukuza ne-analog enkulu, cabanga umzuzwana ngodaba oluthile ibhizinisi lakho elizama ukulunqoba. Ngemuva kwalokho, cabanga ngezimo ezihluke ngokuphelele lapho abantu bathole indlela yokuxazulula leyo nkinga efanayo. Nasi isibonelo:
Iqembu elilodwa ebesisebenza nalo belingacabangi ukuthi lixhumane ngokwanele namakhasimende alo. Bazwile ukuthi umsebenzi omningi owenza ukuthi impumelelo yamakhasimende abo yenzeke ekusithekeni, okwaholela ekulahlekelweni yisisusa seqembu. I-Analog: Umhlangano waleli thimba wawubanjelwe eNew Orleans, ngakho-ke sabayisa ukuvakashela enye yezindawo zokudlela ezidumile zase-Emeril Lagasse. Ngokufana naleli qembu, abapheki nabapheki abasebenza ngemuva kwendawo, kepha nokho kungumsebenzi wabo amakhasimende awuthokozelayo ekugcineni. Ithimba lichithe isikhathi noMphathi oPhethe, abapheki abaningana kanye noMphathi-Jikelele ebabuza mayelana nokuhlangenwe nakho kwabo. Ngenxa yalokho, baqala ukucabanga ngokuhlukile ngokuthi bangahlanganyela kanjani kakhulu namakhasimende abo futhi bahlale bekhuthazekile.
Ukuvuselelwa Komkhiqizo Nokumaketha. Sithanda ukuvala igebe phakathi kwenkampani yakho namakhasimende akho, kanye naphakathi kwabathuthukisi bakho bomkhiqizo, abathengisi bakho kanye nabathengisi bakho. Esikhundleni sokumema ontanga bakho bokumaketha nabomkhiqizo ukuthi balande ezabo zakamuva nezinkulu kakhulu, bacele ukuthi baphathe izindaba zabo kanye nepensela ebukhali, bese usebenzisa isikhathi sokuqalisa ukuxhuma umkhiqizo, ukumaketha, kanye nabathengisi bakho namakhasimende. Lokhu kusebenza kahle kakhulu ngeThip # 1 – amakhasimende akho we-Extreme and Mainstream. Cabanga ngalokhu njengezingxoxo ezilinganayo namakhasimende mayelana neminikelo emisha nokuthola impendulo yesikhathi sangempela kubantu ababaluleke kakhulu — abazoyithenga.
Ukwakhiwa kwamakhono. Ithiphu yethu yokugcina ihlobene nokwakha isethi lamakhono labathengisi bakho. Abantu abathengisayo bahlala befuna izindlela zokucija amakhono abo, bathuthukise umdlalo wabo futhi bajabulele impumelelo enkulu. Njengoba kunikezwe ingqikithi yethu yobukhulu bamakhasimende, sizokwabelana ngokuzivocavoca okuyintandokazi kwethu:
Sithanda ukuthumela abantu abathengisayo lapho bezizwa bekhululeke kakhulu khona — ensimini! Izikhungo zokucwaninga zokucwaninga lapho uqala khona. Bheka izikhungo zokuthengisa zama ukuthola ngababili ngaphakathi mpo ovamile ongaphansi nophakeme. Isibonelo, iToys R Us neBuild-a-Bear yamathoyizi ezingane, iChevy neTesla elidayisa izimoto, njalonjalo. Lokhu kuvivinya kwenziwa kahle ngababili, futhi isabelo sababili ngababili ukuvakashela izitolo zabo ezimbili bese unaka ngokucophelela lokho okwenyukayo noma okwehlisa ukubandakanyeka kwamakhasimende. Siqinisekisa ukuthi amaqembu akho azobuya ephefumulelwe izinto ezimangazayo (nezimbi ngokumangazayo) abahlangabezane nazo futhi bazoba nokuqonda okusha abangakusebenzisa ebudlelwaneni babo namakhasimende.
Ukucabanga ngokukhahlelwa kwakho ngokombono wekhasimende lakho kungenza kube lula futhi kukhuthaze ukuhlela kwakho ukuqala futhi kuholele emiphumeleni ekhiqiza kakhulu nakunyaka omusha ophumelelayo. Sikukhuthaza ukuthi unyakazise ukuqala kwakho okulandelayo bese uzama le mibono ukugcina amakhasimende akho lapho ekhona: enkabeni yakho konke.
Tags: umhlangano wokuthengisa wonyakaukuqalisaumhlangano wokuqalisa umdlaloizibuyekezo zokumakethaUkuvuselelwa Komkhiqizoukuqala kokuthengisaimihlangano yokuthengisaukusebenza kokuthengisaukuhlela ukuthengisaukuqeqeshwa kokuthengisaukuhlela amasu we-akhawuntiabathengisi abaphezulu
U-Ashley Welch noJustin Jones basungulwe ngokuhlanganyela Ukuqanjwa kweSomersault, inkampani yokubonisana nge-Design Thinking enikeza indlela eyingqayizivele ekuthuthukiseni ukuthengisa. Bangababhali be-Naked Sales: How Design Designing Reveives Motives Customer and Drives Revenue. Ngeminye imininingwane, sicela uvakashele ku: www.somersaultinnovation.com.
Izindlela ezi-3 zokuqoqa kalula idatha ye-Prospect nge-LinkedIn Amafomu Wokuhola Ohlanganisiwe Ahlanganisiwe
Ngabe i-Enterprise IoT Izosiza Ukuqalisa Imboni Yezokuthengisa?